कुरा मिलाउन पलको १ करोड प्रस्ताव ? समिक्षा भन्छिन् 'हामी बिच कुनै अनैतिक सम्बन्ध छैन' - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक ०७, २०७८ समय: ११:५३:२१
इटहरी/ चलचित्र क्षेत्र त्यसै पनि रंगिन दुनिया । यस क्षेत्रमा धेरैको आकर्षण बढ्दो छ । तर, पछिल्लो समय गसिप, आलोचना र विवादले यो क्षेत्रलाई दुर्गन्धित बनाएको छ । चलचित्र क्षेत्र पुर्णरुपमा चलायमान नभएपनी यसक्षेत्रमा लोकप्रियता कमाएका कलाकारहरूको अनेक कार्यहरुले यो क्षेत्रलाई नै प्रत्यक्ष असर गरेको छ । पछिल्लो समय मिडियाको हेडलाईन बनेको पल-समीक्षा गसिपले त यतिबेला धेरैलाई झसङ्ग बनाएको छ । धेरैले पलबाट यस्तो हुन नसक्ने बताएका छन् ।
पलको नाम अहिले नवगायिका समिक्षा अधिकारीसंग जोडियो । हुन त पलको नाम उनी अभिनित चलचित्रका अभिनेत्री तथा म्युजिक भिडियोका मोडलहरुसंग नाम जोडिरहेकै हुन्छ । तर, समीक्षा संग नाम जोडिदा भने उनको करियरमै धक्का लाग्ने गरि जोडियो । केही मिडियामा आएका समाचारका आधारमा यतिबेला पल र समिक्षाको लेखाजोखा सुरु भएको छ । यी २ को प्रेम प्रसङ्ग वा अफयरमा छन भन्ने हल्ला केही महिना देखि नै चलेको थियो । यथार्थ कुरा भने गुपचुप नै थियो । प्रायःलाई थाहा भएपनी कोहि बोलेका थिएनन् । तर दुबै मिडियादेखी तर्किन थालेपछि यो कुरा अहिले मिडियामा छाउन थालेको छ ।
पल समिक्षा बिचको गसिप के हो ?
‘सुर्ती माड्दै’ बोलको गीतमा यी २ को अभिनय छ । सोही गीत छायांकनका क्रममा यी २ सम्बन्धमा बसेको चर्चा यतिबेला चलेको हो । तर, सम्बन्धमा आएको उतारचढावले दुबैको करियरलाई यतिबेला धक्का पुगेको छ । सानैदेखि पलको फ्यान रहेकी समीक्षाले पलको साथ पाउँदा खुशी रहेपनी पल भने तर्किएको बताईएको छ । त्यसैले पनि सम्बन्धमा खटपटी आएको हो । दुबै पक्षबाट धम्कीपुर्ण कुराहरु हुन थालेपछि पलबाट १ करोड रकमको प्रलोभन आएको समाचारमा उल्लेख छ । तर, समिक्षाले सो कुरालाई ठाडै अस्विकार गरेपछि विवाहको लागि पल राजी भएका थिए । जुन कुरालाई दुबै पक्षका परिवार र २ संचारकर्मीका बिचमा समझदारी गरिएको समाचार श्रोतमा भनिएको छ । तर, ती संचारकर्मीहरु भने को को थिए भन्ने बारे खुलाइएको छैन ।
पल र समिक्षाको स्पष्टीकरण :
पल शाहले यो हल्ला मात्रै रहेको बताएका छन् । आफ्नो दुश्मनहरुले यस्तो हल्ला फैल्याएको उनको भनाई छ । समिक्षाले आफुलाई अभिभावक रुपमा सम्मान गर्ने तर्क गरेका छन् । यता समिक्षाले पनि आफुले पललाई अभिभावकको रुपमै हेरेको बताएकी छन् । जे जति समाचारहरु बाहिर आएका छन्, सबै कपोकल्पित हो भन्दै उनले आफ्नो सामाजिक संजालबाट एक लामो स्ट्याटस लेखेकी छन् । उनले आफ्नो चरित्र हत्या भएको बताएकी छन् । समिक्षाले ‘हामी बिचमा कुनै प्रकारको अनैतिक सम्बन्ध नरहेको’ बताउदै यस्तो लेखेकी छन् :
मलाई समिक्षा अधिकारी बनाउनु हुने मेरा सम्पुर्ण दर्शक श्रोता ज्युहरुमा हार्दिक नमन गर्दछु। पछिल्लो समय मेरो बारेमा नायक पल शाह ज्यु सङ्ग जोडेर हुँदै नभएको कपोलकल्पित समाचार हरु आएका छन यसप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। समाचारमा मेरो र पल जि को सम्बन्ध लाई तोड मोड गरेर तुच्छ प्रकारका कुराहरु मेडिया मा आएका छन जसले मेरो चरित्र हत्या भएको छ। यसका साथ साथै पल जि को क्यारिअर माथि आच आउने किसिमले सस्तो प्रचार बाजि गरिराको छन। यसो नगर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। बिना स्रोत अफबाह मा लेखिएका यी समाचार ले हामिलाई सामाजिक र चारितृक रुपमा निकै नै असर पुराएको छ यस कुरा प्रती म र मेरो परिवार खेद प्रकट गर्दछौ । एउटै इण्डसट्रीज मा भएको हिसाबले पल जि ले मलाई अभिभावक को हिसाब ले माया गर्नुहुन्छ जुन माया उहाले आफुसङ्ग जोडिएका सबै सहकर्मी हरुलाई गर्नुहुन्छ र गरिरहनु हुनेछ। मेरो कला र क्षमता लाई माया संरक्षण गर्नुहुन्छ म उहाको सदैव फ्यान पनि हु। र हामिबिच मा कुनै प्रकारको अनैतिक सम्बन्ध नरहएको र हामी केवल साथमा काम गरिरहेको छौ र हजुरहरुको माया रहेसम्म सधै राम्रो काम गरिरहने छौ। राष्ट्रको चौथो अङ्ग मानिएको पत्रकारिता का अग्रज र दिग्गज अभिभावक हरुले पनि यसरी मान हानी र चरित्र हत्या हुने किसिमले लेखिएका समाचार ले निकै दुखी छु। मैले यो अपेक्षा गरेको थिएन ।
पलको यसअघिको धरान कान्ड :
गसिपको दुनिया बनेको चलचित्र क्षेत्रका लोकप्रिय नायक हुन पल शाह । म्युजिक भिडियो, फिल्ममा सफलता हासिल गरिसकेका उनका पछि निर्माता निर्देशकहरुको लाईन छ । आफ्नो काम गराउन पर्खिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय सामाजिक कार्यमा पनि देखिँदा उनको लोकप्रियता झनै बढेर गएको छ । जसले गर्दापनी उनका सानातिना गल्तीहरु भने त्यसै हराउछन् । यद्यपि उनको विवाद खासै बाहिर आईरहेका हुदैन थिए । अहिले यो लफडामा परेका पललाई केही समयअघि धरानमा कुटपिटको आरोपमा प्रहरी चौकीमा उजुरी परेको थियो । उनी मिलापत्रका लागि प्रहरी चौकीमा समेत पुग्नु परेको थियो । सो बेला उनका गार्डले हातपात गरेको र उनले नरोकेको बताईएको थियो । जहाँ पत्रकारमाथी पनि उनका सहकर्मीहरुले प्रहरी चौकी भित्रै अभद्र ब्यवहार गरेका थिए । पलको नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानसंग लफडा परेको थियो ।